Wakanyorwa ‘Mubhuku raMwari Rokuyeuchidza’ Here? | Swedera Pedyo naMwari
Wakanyorwa ‘Mubhuku raMwari Rokuyeuchidza’ Here?
JEHOVHA anoona here zvinoedza kuitwa nevanamati vake kuti vamufadze? Hongu! Anotoona zvinopfuura mabasa ekunamata avanoita uye mashoko ekurumbidza avanotaura. Anoonawo kunyange paya pavanofunga zvakanaka nezvake. Uyewo Jehovha haazombokanganwi vanhu vake uye mabasa avo. Tingava sei nechokwadi nazvo? Mhinduro tinoiwana mumashoko akanyorwa nomuprofita Maraki.—Verenga Maraki 3:16.
Munguva yakaprofita Maraki, anenge makore 500 Jesu asati auya panyika, tsika uye nyaya dzechitendero muIsraeri zvakanga zvaipa zvisingaiti. Vapristi vakanga vasisaiti basa ravo uye vanhu vakatanga kuita zvinhu zvaizvidzisa Mwari zvakadai seuroyi, upombwe uye kubiridzira. (Maraki 2:8; 3:5) Kunyange zvazvo pakanga pazara uipi hwakadaro, paiva nevamwe vaIsraeri vakaramba vakatendeka. Vakanga vachiitei?
Maraki anoti: “Vaya vaitya Jehovha vakataurirana, mumwe nomumwe.” Kutya Jehovha uku hakurevi kumuzeza kuti angatikuvadza. Maraki pano aitaura nezvevaIsraeri vairemekedza Mwari zvikuru zvokuti vaisada kumugumbura. Ona kuti vanhu ava vaitya Mwari “vakataurirana.” Zvinoita sokuti vaiungana pamwe chete vachitaura zvakanaka nezvaJehovha uye vachikurudzirana kuti vasatsauswa kana kuodzwa mwoyo neuipi hwakanga hwakazara.
VaIsraeri vakanga vakatendeka vakaratidza kuti vaitya Jehovha neimwe nzira inokosha. Vaifunga “nezvezita rake.” Rimwe Bhaibheri rinoti “vaikwidziridza zita rake.” Saka vanhu ava vaitya Jehovha Mwari vaimukudza mupfungwa dzavo. Mumwe nomumwe aidzamisa pfungwa achifunga nezvaJehovha uye zita rake guru. Jehovha aiona zvavaiita here?
Maraki anoti: “Jehovha akaramba akateerera uye achinzwa.” Jehovha ainyatsoteerera ari kunzvimbo yake iri kumusoro kudenga achinzwa shoko rose rokurumbidza raitaurwa nevanomunamata kune mumwe nomumwe. Aionawo zvinhu zvose zvaifungwa zvakadzama nemunhu mumwe nemumwe. (Pisarema 94:11) Asi haana kungogumira pakuteerera zvinhu zvakanaka zvavaitaura nokuona zvakanaka zvavaifunga.
“Bhuku rokuyeuchidza rakatanga kunyorwa pamberi pake,” anodaro Maraki. Bhuku iri rinomiririra kuyeukwa kunoitwa naJehovha vaya vanomushumira vakaperera kusvika pakupedzisira. Ona kuti rinonzi “bhuku rokuyeuchidza.” * Izvozvo zvinotiratidza kuti Jehovha haazombokanganwi vanamati vake vakatendeka uye shoko rose rakanaka ravakataura nezvakanaka zvose zvavaifunga uye zvavakaita kuti vamurumbidze. Mwari ane chikonzero chokuvayeuka saizvozvo. Anovimbisa kupa upenyu husingaperi kune vaya vane mazita asingazodzimwi mubhuku rake rokuyeuka. *—Pisarema 37:29.
Zvinonyaradza chaizvo kuziva kuti Jehovha anokoshesa zvose zvatinoita kuti timunamate tichimufadza! Mashoko ari pana Maraki 3:16 anofanira kuita kuti tinyatsofunga nezveukama hwedu naJehovha. Zvakanaka kuzvibvunza kuti: ‘Zita rangu riri mubhuku raMwari “rokuyeuchidza” here?’ Kana zuva roga roga tikagara tichifunga, tichitaura uye tichiita zvinhu zvinozoita kuti Jehovha atiyeuke, zita redu richavamo.
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna December:
Nahumi 1-3–Maraki 1-4
^ ndima 8 Shoko rechiHebheru rokuti “kuyeuka” rinoreva zvinopfuura kungokwanisa kurangarira chimwe chinhu chakamboitika. Rinogonawo kureva zvinozoitwa nemunhu pamusoro pechinhu chaanenge ayeuka.
^ ndima 8 Kuti unzwe zvakawanda pamusoro peupenyu husingaperi hunovimbiswa naMwari, ona chitsauko 3 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.